Dareewalkii go'doonsanaa ee gaariga cusub loo iibiyay - BBC News Somali
Dareewalkii go'doonsanaa ee gaariga cusub loo iibiyay
Xigashada Sawirka, Zrzutka.pl
Fardin Kazemi had been delivering raisins when his lorry broke down in central Poland
Dad badan oo reer Poland ah ayaa iska uruuriyay deeq lacag ah oo gaareysay $65,104 oo dollar si ay gaari xamuul ah oo cusub ugu iibiyaan dareewal u dhashay Iran kaas oo go'doomay ka dib markii uu gaarigiisa ka hallaabay.
Fardin Kazemi wuxuu miraha sabiibka u waday dalka Poland, ka dibna wuxuu u sii gudbi lahaa dalka Czech Republic, si uu uga soo qaado alaab uu geyn lahaa Iran.
Wuxuu iska dhex seexday gaariga ka dib markii uu awoodi waayay in uu iibsado qarashka ku bixi lahaa qeybta gariga uu ka hallaabay.
"Dadka Poland waxay ii noqdeen malaa'ik," ayuu yiri Kazemi.
Ninkan wuxuu ka soo jeedaa deegaan lagu magacaabo Khoy oo ku yaalla Waqooyi-Galbeed Iran. Ugu yaraan 25 sano ayuu ahaa dareewal wada gaari xamuul ah oo u kala gudba Yurub iyo Iraan.
Si kastaba, ka hor inta uu san dalkiisa kula noqon gaari cusub, wuxuu u baahan yahay in uu fasax ka helo maamulka Iran, iyadoo meesha ay ku jirto cunna qabateynta Iran ka saaran in alaabaha qaar ee midowga Yurub la geeyo.
Caqabadda uu Fardin Kazemi la kulmayay waxay billaabatay 3 December ee sannadkan, markii gaarigiisa oo 30 sano uu watay uu ku dhex hallaabay bartamaha magaalada Koziegłowy, ee Waqooyiga Katowice, dalka Poland.
In dib loo sameeyo gaariga waxay noqotay mid aad qaali u ah, haddana aan qiimo u yeeleyn gaarigaas.
Dareewallada gawaarida xamuulka ee u dhashay Poland ayaa billaabay olole dhanka internet-ka ah, si ay u ururiyaa lacag gaariga loogu sameeyo ninkaa, waxaa sidoo kale la siiyay meel uu seexdo iyo cunto.
Markii hore waxay doonayeen in ay uruuriyaan ilaa 100,000 zlotys oo u dhiganta $26,000 oo dollar. Muddo 24 saac ah ayey intaa ku dhaaftay, haddana laba jibaar ka badan ayey uruuriyeen, welina waxaa soo dhacaya sadaqada ay dadkaas siinayaan ninkaas u dhashay Iran.
Hooyadiisa weli war kama haysto Fardin Kazemi iyo xaaladaha uu ku sugan yahay
Waxaa la caddeeyay in faa'iido aysan lahayn in dib loo sameeyo gaarigaas xamuulka ah, haddana waxay qorsheynayaan in mid cusub loo iibiyo.
Nin maydka hooyadiis bixiyay oo qaraxyo loo isticmaalay
Nin sawirka lugtiisa la isticmaalay oo dacwoonaya
Sida uu dhigayo sharciga Iran, gaari la soo watay seddax sano ka badan lama geyn karo dalkaas, sidaa aawadeed waxay dadka Poland doonayaan in ninkaas ay u iibiyaan gaari celis ah oo la soo saaray 2017-kii, iyo in la jiido gaariga xamuulka ee ka hallaabay Kazemi.
Si kastaba, qorshaha hadda wuxuu weli caqabad kala kulmayaan cunna qabateynta Iran saaran ee ah in alaabta qaar ee EU aan dalkaa la geyn karin. In keligii laga cafiyo ayaana suuragal ah maadaama uu bedelayo gaarigiisa.
"Yurub oo dhan waxaa ku dhex safrayay muddo 27 sano ah... muddadaas fursad uma helin in dadka Poland aan si fiican u barto, in kastoo markasta ay ii fiicnaayeen. Hadda waxaan ogaaday in ay yihiin dad aad u wanaagsan oo qalbi fiican, mana ka fileyn caawin intaan la eg", ayuu u sheegay Dziennik Zachodni.
"Hooyadey uma sheegin arrintan oo dhan, si aanan walwal ugu abuurin. Waxay u haystaan in aan aad u fiicanahay."
YouTube oo ciqaabtay nin caan ah oo mayd muuqaal ka duubay
7 Agoosto 2019